Matrox Monarch Edge သည်ရုပ်သံလွှင့်သူများအားပိုမိုကောင်းမွန်သော Live Video Content များကိုဖြန့်ဝေရန်ကူညီသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Matrox ဧကရာဇ် Edge လူငယ်ကဏ္ဍ သာ. ကောင်း၏တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာဖြန့်ဝေကူညီပေးသည်
Matrox ဧကရာဇ် Edge လူငယ်ကဏ္ဍ သာ. ကောင်း၏တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာဖြန့်ဝေကူညီပေးသည်
ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးနှင့် encoded သောလမ်းပိုမိုမြင့်မားအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများအတွက်တောင်းဆိုချက်များကိုတိုးမြှင့်ဆက်လက်အဖြစ်ထိရောက်မှုနှင့်အဆင်ပြေပိုပြီးမရှိမဖြစ်ဖြစ်လာကြပြီအထူးသဖြင့်အခါ, အရေးကြီးပါသည်။ ထုတ်လွှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည်ဤသိနှင့် encoding ကနည်းပညာအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်း 4k အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေသောအတူသာလျှင်အသံလွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရှေ့ဆက်ကတိတော်များကိုတစ်အနာဂတ်နှင့်နည်းလမ်းတွေနဲ့တူနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်း provider ကအဲဒီမှာရှိနိုင်ပါသည် Matrox ယင်း၏တိုးတက်မှုသြဇာလွှမ်းမိုး။ က H.264 codec ၏ကျယ်ပြန့်-အထိတတ်လွယ်ခြင်းနှင့်အတူသူမတူနိုင်တဲ့နှင့်ကြံ့ခိုင် encoding ကအာဏာကိုပေးအပ်ဖို့ကြွလာသောအခါ, Matrox အတိတ် 35 နှစ်ပေါင်းအရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုထုတ်ကုန်များ၏တစ်ဦးပံ့ပိုးပေးသူအဖြစ်က၎င်း၏အချိန်အတွက်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည်။ Matrox ၏ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အမြဲအကြံထမြောက်ရသောအများနှင့်မြင့်မားသောနည်းပညာကဏ္ဍအတွင်းတီထွင်ဖို့မောင်းနှင်လျက်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုဆက်လက်နှင့်အချိန်ကျော်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်အဖြစ် 1976 ကတည်းကကုမ္ပဏီ, ဗီဒီယိုပညာရှင်များနှင့်ထုတ်လွှင့်ဖို့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အတွက်အရာ၌နန်းထိုင်လိုက်ပါတယ်။ အစောပိုင်းကဒီဧပြီလမှာ 2019 NAB ပြရန်, Matrox သူတို့ကိုကောင်းစွာထိုက်တန်တဲ့စပါးကိုရိတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် webcasts အန်ကုဒ်၏မိတ်ဆက်, မှတစ်ဆင့်ယင်း၏အောင်မြင်မှု၏အထွတ်အထိပ်သရုပ်ပြ Show ကို Winner ဆု၏အဝေးမှထုတ်လုပ်မှု & အကောင်းဆုံးအတွက်တစ်နှစ်တာ 2019 ကုန်ပစ္စည်း NAB ။
ဒီနှစ် 2019 NAB ပြရန် Matrox အဆိုပါပွဲထုတ်မိတ်ဆက်အဖြစ်တစ်စိတ်ကူးသရုပ်ပြဖြစ်သက်သေပြ Matrox ဧကရာဇ် EDGEတစ် 4K / Multi-HD webcasts နှင့်ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုအန်ကုဒ်။ ဒါကအန်ကုဒ်ကြံ့ခိုင် low-အောင်းနေချိန်နှင့်အတူထုတ်လွှင့်ပေးပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းထဲမှာထုပ်ပိုးထားတဲ့ပြောင်းလဲနေသော H.264 encoding ကစွမ်းရည်, အနိမ့်ပါဝါနှင့်ခရီးဆောင်ပစ္စည်း။ အဘယ်အရာကိုဒီအန်ကုဒ်အကျိုးရှိစွာနှစ်ဦးစလုံးကိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ High-frame rate ကို 4K (HFR), 4K 360 VR နှင့် Multi-ကင်မရာရွေးချယ်ရေး၎င်း၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့်ထူးခြားဆွဲဆောင်မှုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူကူညီပေးသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးအတွေ့အကြုံကိုကြည့်ရှုနေတဲ့နှိုငျးမဲ့ 4K ကယ်နှုတ်တော်မူရန်အဘို့အရိုးရှင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းများမှာဧကရာဇ် EDGE ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဘယ်လိုအဆိုပါဧကရာဇ် Edge ဗီဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးသည်
Matrox နည်းပညာဆိုင်ရာ Marketing Manager
အဆိုပါဧကရာဇ်အစွန်းကြီးစွာသော webcasts အတွင်းနည်းပညာဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏သဘောတူညီမှုအဖြစ်ထုတ်လွှင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ, ဤအတွက် 2019 မှာအကောင်းဆုံးရုပ်ပြခဲ့သည် NAB ပြရန်။ အဆိုပါဧကရာဇ် Edge ရဲ့ function ကိုကုမ္ပဏီရဲ့နည်းပညာပိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာများကရှငျးပွခဲ့, ဒန် Maloney။ ကိုယ်စားပြုနေစဉ် 2019 NAB Show မှာ Matrox, Maloney တစ်ဦးအန်ကုဒ်အတိုင်း, ဧကရာဇ် Edge မြန်နှုန်းမြင့်ပြိုင်ကား encoding ကသာစံပြမဖြစ်ဘယ်လိုဖော်ပြထားပေမယ့်ဘယ်လောက်ယင်း၏လေးသွင်းအားစု (တဦးတည်း 12 SGI သုံး 3gsdi) / အပြည့်အဝ 4k 60 စီးဝှက်သို့မဟုတ် multi-ထောင့်များတွင်နိုင်ဖြစ်စေ မှတဆင့်တည်ခင်းဧည်စီးဖို့ဆင်တူ multi-ကင်မရာပတ်ဝန်းကျင် တိုက်ရိုက်လွှ youtube က ပတ်ဝန်းကျင်မှာ။ ဒီအမရရှိနိုင်လေးပါးထဲကတစ်ဦးထက်ပိုဦးစားပေးမည်ထောင့်ကနေ content တွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုကြည့်ရှုသူအန်ကုဒ်အသက်ရှင်သောအကြောင်းအရာကြည့်ရှုရန်သူတို့ကို enable မယ်လို့ထောင့်ချိုးခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ပိုမိုဝေးလံသောထုတ်လုပ်မှုဘက်မှဆွေးနွေးခြင်းများတွင် Maloney နောက်ထပ်အဓိကအား4မှတဆင့်မျိုးစုံစီး၏ဘယ်လိုဧကရာဇ် Edge ရဲ့အသုံးပြုမှုအကွောငျးပွော: 2:210 bit နဲ့အသံလွှင့်, အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာလေးလည်းတစ်ထုတ်လွှင့်မယ့်နည်းလမ်းများရိုးရှင်းပြီးဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလျှော့ချနိုင် b-ဗန် (အသံလွှင့်ဗန်) ။ တစ်ဦးကင်မရာမင်းထိုကဲ့သို့သောအားကစားဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏တိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးသွားနှင့်ရုပ်ရှင်မှဖြစ်လျှင်အခြေခံအားဖြင့်, ထို့နောက်သူတို့, တည်နေရာပေါ်ထွက်သွားရိုက်ကူးအကြောင်းအရာဝှက်နှင့်တစ်ဦးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ feed ကိုပေးဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုများအတွက်စတူဒီယိုမှတိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင် တူညီတဲ့အကြောင်းအရာ။
ဒါကြောင့်အသံလွှင့်လောကီသားတို့သည်အများနှင့်သာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သော 4k တစ်ဟုန်ထိုးမှကြွလာသောအခါဆွေးနွေးရန်အများကြီးရှိပါတယ်။ ဗီဒီယိုကိုအသံလွှင့်ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုအကြောင်းအရာထည့်သွင်းအာရုံစိုက်နည်းလမ်းများတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်ရှုခင်းအဖြစ်လေ့လာဆည်းပူးခြင်းနှင့်နောက်ထပ်မျိုးစုံထောင့်ကနေတိုက်ရိုက်စီးထဲမှာဖြန့်ဝေ၏မွေးရာပါအဆင်ပြေစေရန်ကပြွီးသို့အသစ်တီထွင်မှုများအရပျကိုထုတ်လွှင့်အဖြစ်အစွန်းရောက်ကျော်လွန်သောအသွင်ပြောင်းလျှက်ရှိသည်။ အဆိုပါ OVP ဆိုမလိုချင်တဲ့ downscaling ကိုင်တွယ်နေစဉ် Matrox ဧကရာဇ် Edge ၏ဆွဲသွင်းပါဝင်မြင့်မားသည် frame နှုန်း (4 သို့မဟုတ် 50 fps) မှာ 60K ၏ encoding ကအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးယူ Matrox enabled ကွောငျ့နည်းပညာဆိုင်ရာထိရောက်မှု၏ဤအမျိုးအစားင် Show ကို Winner ၏အဝေးမှထုတ်လုပ်မှု & အကောင်းဆုံးအတွက်တစ်နှစ်တာ NAB 2019 ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပြသပါ Winner ဆု၏ InfoComm 2019 အကောင်းဆုံး.
Matrox နှင့်ဧကရာဇ် Edge အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ထို့နောက် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အဘယျကွောငျ့ 4K / Multi-အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်HD webcasts / Remote ထုတ်လုပ်မှုကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Matrox ထုတ်လွှင့်အတွက်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာပေးပို့များစွာသောအရင်းအမြစ်ကိုမှန်ကန်စေသည်။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 4K ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အန်ကုဒ် H.264 codec high-အရည်အသွေးဗီဒီယို MATROX ဧကရာဇ် Edge multi ထောင့် NAB NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြပွဲ 2019 NAB16 nabshow 2019-08-26
နောက်တစ်ခု: ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး VMA ဆန်ခါတင်များအတွက် VFX ဘဝမှကယျတငျ